Fanakalozam-bola any Thailandy " Journey-Assist - tahan'ny fifanakalozana ankehitriny. Pattaya Puhket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Fifanakalozana fifanakalozana vola any Thailand
Ny haben'ny vola any Thailandy dia bat бат (THB). Misy satang (farantsakely 100) amin'ny baht (vola taratasy) iray. Ny satana dia nanjavona tamin'ny fivezivezena, saingy mbola afaka mahita farantsakely amin'ny antokom-pinoana misy satangs 25 sy 50 ianao. Misy koa ny vola 1, 2, 5, 10 baht. Ary ny vola taratasy dia omena amin'ny antokom-pinoana 10, 20, 50, 100, 500 ary 1000 baht.
Soa ny fifanakalozana amin'izao fotoana izao!
Aiza no mahasoa ny manova vola any Thailand
Karatra plastika any Thailand
Ny vola eo an-toerana ihany no ekena handoavana vola any Thailand. Ny tokana tokana dia ny fametrahana "volondavenona" ho an'ny serivisy fitsangatsanganana.
Arak'izany, ny vola tianao ho avy dia tokony hovana amin'ny Baht.
Taham-panakalozana ankehitriny (Baht - Dolara, Euro)
Eto ambany no ahitanao ny mpanova vola (calculator). Efa foana izany lesona ofisialy ankehitriny!
Rohy mahasoa Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny Thailand
Taham-panakalozana ao amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok
Sokajy amin'ny fifanakalozana Pattaya ankehitriny
Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny Phuket ankehitriny
Ny fironana Baht to dollar dia azo arahana eto
Taham-panakalozana amin'ny fifanakalozana Superrich
Inona ny vola tokony hoentiko any Thailand?
Marihina fa ny fifanakalozana dia miovaova arakaraka ny ataon'ilay volavolan-dalàna. Izany hoe, ny lehibe kokoa ny anaram-boninahitra, no mahasoa kokoa ny làlana fifanakalozan. (io no mampiavaka ny firenena maro any Azia Atsimo Atsinanana).
Banknotes $ 50 sy $ 100 - ny tahan'ny dia 31 baht ho an'ny $ 1 (eo ho eo)
Banknotes 5 $ - 20 $ - taha 30,5 baht ho an'ny $ 1 (eo ho eo)
Aiza sy ahoana ny fomba hanovana vola any Thailand
Tonga vao sambany, raha mila vola an-toerana, azonao atao ny mampiasa fifanakalozana amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy dia tonga lafatra ny làlambe fa azo alaina kosa raha toa ka misy ampahany kely.
Ny fifanakalozana dia manolotra ny tahan'ny mahaliana indrindra amin'ny seranam-piaramanidina Sanda + и SuperRich.
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola eo amin'ny seranam-piaramanidina Thailand
Raha tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok ianao, dia mitadiava ireo fifanakalozana ireo any amin'ny gorodona. Araho ny famantarana Rohy lalamby (misy ny efitranon-tsofina mankany an-tanàna dia hita amin'ny tany ambanin'ny tany).
Mpivarotra any amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok Suvanabhumi
Mpivarotra ao amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok (Suwanobhumi)
Raha manana olana amin'ny fitadiavana ianao dia afaka mifandray amin'ny mpiasa seranam-piaramanidina foana miaraka amin'ny fangatahana hampiseho aminao "manova vola (vola takalo)". Tena hanampy anao izy ireo. Nefa eto ianao no afaka mahita ny ankehitriny Fianarana any amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok (Sarobidy +).
Mpivarotra any Thailandy
Tombony lehibe indrindra ny fanovana vola any amin'ny birao fifanakalozana (miaraka amin'ny Exchange Exchange), na amin'ny banky. Saika ny trano fivarotana lehibe rehetra dia manana birao fifanakalozana avy amin'ny banky sasany. Ary amin'ny faritra fizahan-tany, ny mpivarotra sy ny banky dia hita isaky ny mandeha. Ny tahan'ny +/- dia mitovy amin'ny olona rehetra, ka mandehandeha fotsiny, safidio izay hahaliana anao indrindra.
Tadidio fotsiny etsy ambony Ny tahan'ny fifanakalozana dia miankina amin'ny anaram-piangonana amin'ny banky. Ary mety handà ny fanekena volavolan-dalàna izy ireo, na hanova azy ireo amin'ny fihenany.
Tandremo koa ary vakio avy hatrany ny vola voaray avy amin'ilay mpivarotra. Miseho ny karazany 🙂.
Amin'ny fifanakalozana, izay any amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fandraisam-bahiny, dia tsara kokoa ny tsy hanovana ny vola. Miara-mianatra amin'izy ireo (ho an'ny kamo) ny tsy mahasoa.
Ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny banky dia matetika miasa ny faran'ny herinandro manomboka amin'ny 8:30 ka hatramin'ny 22:00, ary ireo birao fifanakalozana fifanakalozana dia misokatra manomboka amin'ny 8:30 ka hatramin'ny 15:30. Fa any amin'ny faritra fizahan-tany dia mety misy safidy ... misy aza ny mpanakalo mifandimby.
Ny fampianarana tsara indrindra (subjectively) dia manolotra tambajotra fifanakalozana Superrich. Azonao atao ny manamarina ny tena fizotran'izy ireo ity rohy ity.
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny fivarotana firavaka. (Thailand)
Ary na izany aza, fomba tsy nampoizina manova vola amin'ny tahan'ny mahazatra, ity fivarotana firavaka... Azonao atao ny manatona izay misy ny teny hoe "chengj mani", ary tsy holavina ianao. Miovaova ny lalan'izy ireo, saingy mety ho tsara, na tsara aza :).
Matetika ny fisintonana vola eo amin'ny ATM any Thailand, saingy tsy mahasoa:
Ny fetra ny fatran'ny fandroahana ambony indrindra, raha ny fitsipika dia 10 000 baht, indraindray 20 baht (000 sy 325 $ tsirairay avy)
Isaky ny fisintomana vola, na inona na inona vola dia miakatra ny komisiona iray 220 Baht (eo ho eo 7$). (fampahalalana ho an'ny Aprily 2019)
Ho fanampin'io vaomiera io dia miampy ny famerana ny vola amin'ny carte de crédit amin'ny vola famoahana vola, amin'ny taham-panakalozana tsy mendrika velively anao.
Ankoatr'izay, ny bankinao dia mety manala vola ihany koa amin'ny fisintonana vola amin'ny ATM iray amin'ny banky hafa.
Aza hadino ihany koa fa i Thailand dia heverina ho faritra mety hampidi-doza (amin'ny lafiny fitantanana ny banky), izay midika fa mety hanakanana ny karatra anao ny banky aorian'ny alohan'ny fifanakalozana voalohany. Mba hialana amin'izany dia mila fomba iray na hafa ianao, alohan'ny dia alehanao, ampandrenesanao ny bankinao hoe mikasa ny hampiasa ny karatra plastika ao Thailand ianao.
Ny mandondona ao Thailand dia mahazatra ny manome amin'ny faritra fizahan-tany ihany, saingy tsy ilaina izany. Matetika, toro-hevitra mankany amin'ny:
Ho an'ny mpanampy amin'ny trano fandraisam-bahiny - 10-20 baht isan'andro.
Porters - 5-10 baht
Mpamily fiarakaretsaka sy tuk-tuk. (boribory ny vola voaloa 10)
Ao amin'ny trano fisakafoanana, serivisy (serivisy serivisy) dia efa tafiditra ao anaty volavolan-dalàna ho andalana tokana. Ary mazàna dia mandany 10% amin'ny sandan'ny baiko izy ireo.
Manantena izahay fa ho ilaina aminao izany fampahalalana rehetra izany 😉
Taham-panakalozana ao Pattaya
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Phuket
Manao ahoana ny vola Thai?
Hafa raha toa ka very ny karatra plastika:
Fomba fitantanan'ny governemanta: monarchie konstitusional.
Fivavahan'ny fanjakana - Buddhism
Anaran'ny mponina: Thai, Thai, Thai, Thai.
Kaody fiantsoana: +66 (8-10-66)
Ny vola any Thailand dia ฿ Thai Baht.
Tany Phuket, nipetraka tany Patong izy ireo, noho izany dia misy fifanakalozana amin'ny dingana rehetra. Ary miasa any izy ireo ka hatramin'ny hariva. Fa tsara kokoa ny mandeha an-dalana, mitady làlana. Mety misy ny fahasamihafana 5 isan-jato na dia amin'ny mpivarotra mpifanolo-bodirindrina aza.
Torohevitra ihany ny manisa ny vola amin'ireo mpiasa amin'ireo mpanakalo fifanakalozana, satria misy tsaho fa afaka nohafohezina. Na dia tsy nahatsikaritra izany aza aho dia mety ho satria hitako fa manaraka ny manipy rehetra 🙂 aho.
Any amin'ny seranam-piaramanidina, raha tsy mila vola haingana ianao, dia tsara kokoa ny tsy hanovana izany mihitsy. Ny fampianarana dia misy 10 isan-jato latsaka tsy misy tombony noho izy na aiza na aiza. Fa any ianao dia tena tsara fanahy fanasana, na dia avy any lavitra aza dia nanomboka mitsiky sy mitsiky izy ireo hoy izy, tongava